UKUSUKA 'KWIKORRA' UKUYA KU 'SHE-RA': I-KISS EGUQULE IPARADIGM - IXESHA LOKONWABA
Ukusuka eKorra kuye ku-She-Ra: Ukiss eguqule iParadigm
** Abaphangi ngeXesha lesi-5 She-Ra kunye neeNkosazana zaMandla . **
Akukho mntu unokumangalela She-Ra kunye neeNkosazana zaMandla ye-queerbaiting kwakhona, nangona isityholo sasihlala sibonakala ngathi siyathandabuza. Kwisiqendu sokugqibela, emva kwesinye sezona zitshisa zintle kwiintsomi, uCatra noAdora bavuma uthando lwabo omnye komnye kwaye basindisa umhlaba kunye. Yayisisiphelo esigqibeleleyo kuthotho olwalususela ekuqalisweni kwalo, luzama ukutshintsha incoko kwimithombo yeendaba yabantwana. Ayenzelanga oko kuphela, kodwa umgudu owenziweyo ukuze ufike apho yayingumsebenzi wothando.
Sele ndizibonile ezinye izimvo zihlazisa ukwanga kwesi sibini kuba ubudlelwane be-wlw buthathwa njengekhuselekileyo kunobuhlobo be-mlm kumabonwakude. Ndicinga ukuba kufanelekile ukubonisa ukuba kukho ubudlelwane obuninzi be-wlw kunokuba kukho i-mlm, ngakumbi xa ubandakanya abantu abadlulayo nabangengabo. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba kwakulula ukwenza uCatra noAdora ukuba kwenzeke okanye akubalulekanga ukuba yenzekile.
Xa uKorra noAsami badibana Igosa likaKorra , Benza njalo nge-subtext kunye nokugcina ngesandla ukuba bonke abantu abafikayo kubaphulaphuli bavaliwe, kodwa kamva kwaqinisekiswa ngababhali. Amaxesha onyaka apho ingxelo yaqala ukusuka kwiKorra naseMako kwaye yagxila ngakumbi kubudlelwane bukaKorra kunye no-Asami yayiyindawo apho uthotho lwalukhutshwa kumabonwakude oqhelekileyo kwaye lwenziwa kwiNick.com.
iintlanzi zeentlanzi kunye nogqirha ogcinayo
Ngoku ka Umyili-ntsebenziswano uBryan Konietzko , xa bezisa uluvo kuthungelwano, [W] hile bebexhasa bekukho umda wokuba singaya kude kangakanani nayo, njengoko inqaku ngalinye ndilifundile ngokuchanekileyo. Bakwazile ukufumana inqaku kunye nombono ngaphesheya komxholo, umculo othandana kakhulu, kwaye ke, bayila ukuma kwabo ngokufana nomtshato.
rachel 500 iintsuku zehlobo
Ngaba yayiyimpumelelo ye-slam-dunk yokumelwa kwe-queer? Ndicinga ukuba iyasilela kuloo nto, kodwa ngethemba lokuba kukuphambili okubonakalayo ngaphambili. Kwaye kwaba njalo.
UKorrasami wayengumtshintshi womdlalo. Yayiyinto endandiyithumela ngenqanawa, kodwa ndaxelelwa ukuba ayinakuze yenzeke kuba ayisiyiyo loo nto unakho yenzeke, ngokugqithiseleyo, kwimiboniso yeTV. Nangona kunjalo, ukubanakho kolo tshintsho kulandele uKorrasami ekubeni luncwadi.
Ngo-2018 (wow, kwakukudala kakhulu oko?), Siphumelele ezimbini ezinkulu: UMarceline noPrincess Bubblegum bephuzana Ixesha lokonwaba , kwaye i USteven Universe umtshato phakathi kweRuby neSapphire.
Kunye Ixesha lokonwaba , ubudlelwane phakathi kukaMarceline noPrincess Bubblegum babucace gca kum, kodwa kwabakho inqanaba lokungacaci okwakwenza ukuba kukhuseleke-kunekhowudi eyaneleyo yokuba abantu bangabinakho ukuyiphikisa, kodwa kwakulula kubantu be-LGBTQ ukuba bazibone bekuyo. Kwisiqendu sokugqibela, bobabini bavunyelwe ukuba baphuze kwiscreen umzuzu othandekayo.
Umvelisi olawulayo kunye nomboniso UAdam Muto ucacisile ukuba ngelixa bevunyelwe ukunika uBubbline umzuzwana, yayinguHanna K. Nyströmthe owenza ukuba kwenzeke:
Kwakukho incoko malunga [namalungiselelo], kodwa yayixhomekeke ku [Hanna K. Nyströmthe], igcisa lebali lebali elifumene lo mboniso, ukuba athathe isigqibo sokuba uza kuthatha ntoni. Ngokwenyani yayingekho kulwandlalo xa yayingeniswa. Khange ithethe ukuba bayamanga. Yatsho nje ukuba ‘banexesha.’ Xa uHanna wayekhwele kuloo nto, kwakukho inqaku elincinane eludinini elalisithi ‘Yiza!’ Elinendawo enkulu yesikhuzo. Yiyo kuphela inqaku. Andikwazi ukuphikisana naloo nto.
Kwaye nathi asikwazanga. Ukuncamisa kwakubalulekile, kum, kuba kwakwenzela ukuba abantu bangabinako ukutyhola abalandeli ngokufikelela okanye ukubonisa kwaye baphikise umbono wokuba ukwanga ngaphambili nangaphakathi phakathi kwabafazi ababini kwakungafanelekanga kumabonwakude wabantwana- ngakumbi xa umboniso wawuneziqendu ezothusayo ezinje ngeBreezy ebinayo Okuninzi yesini esahlukileyo esilinganiswe ngesini.
Umtshato kaRuby noSapphire ku USteven Universe Ngokuqinisekileyo yenye yezona zinto zinkulu eziza kwenzeka kulo mboniso. Ukususela kumzuzu esathi safumanisa ukuba iGarnet yayiyingxubevange yamatye amabini anqabileyo kwaye uthando lwabo lwaba yinxalenye ephambili yesazisi sikaGarnet, yayiphakanyisiwe ngokucacileyo ukusuka kumxholo ongezantsi ukuya kwisicatshulwa. Ukubanika umtshato yayiyenye indlela yokulungisa ubudlelwane babo.
Umakhi woluhlu uRebecca Sugar kwafuneka alwe nzima ukwenza oko kwenzeke kuba, nangona iigugu ngokucacileyo zinekhowudi yabasetyhini, zingaqhelekanga kwaye zincinci, ngoko ke kukho igumbi lokubhabha-ngakumbi kuba uRuby uyibhotile kakhulu kuyilo. Iswekile wachaza LEYA ukuba, ngo-2013-2014, waqala ukuza ubuso ngobuso nokungalungi ngokupheleleyo kokukwazi ukuphucula ubudlelwane kunye nokuba nesilingi ekuphuhliseni ulwalamano nabanye abalinganiswa kwakucace gca.
ellen degeneres isikhewu somgca wempahla
Kwakukho apho ndaye ndaziswa ukuba istudiyo… Ndaye ndaziswa entlanganisweni apho [istudiyo] sathi, Siyazi ukuba uyayenza lento, kwaye siyakuxhasa ukuba uyayenza le nto… Asifuni ukunika amanqaku ngale nto, kodwa kufuneka sinike amanqaku kule nto kwaye kwakunzima kakhulu ukuhamba. Ekugqibeleni, ndathi, ukuba oku kuzakundibiza umboniso wam ulungile kuba oku kukungabikho kokusesikweni okukhulu kwaye kufuneka ndikwazi ukuzimela ngokwam kunye neqela lam ngalo mboniso kwaye nantoni na engaphantsi ayizukuba nabulungisa kubaphulaphuli bam.
Nangona kunjalo, umzuzu wenzekile, kwaye wawumnandi ngendlela engummangaliso. Inesiqendu sayo esikhethekileyo, njengezinye izibini ezitshatileyo, kwaye abantwana abancinci baye babona abalinganiswa abanamakhowudi amabini becebisa, batshata, kwaye bethandana. URuby kunye neSapphire kufuneka babe nothando olunyulu, oluqhelekileyo, kunye nolucingisisiweyo endicinga ukuba lubaluleke kakhulu ukuba nalo xa sicinga ngokumelwa.
Yintoni eyenza ukwanga kukaCatra noAdora kwahluke? Umahluko kukuba ibingengomzuzwana nje okanye inabalinganiswa abaxhasayo. Yayingumboniso obonisa i uphawu lwetayitile, lwalwakhiwe kukutsha kancinci, kwaye… kwakonakele. Ubudlelwane buka-Adora noCatra bufakwa emngciphekweni, ukuxhatshazwa, amanxeba okukhula phantsi kwesithupha se-impiriyali, kunye namabhinqa amabini aselula atsalelwa kwiindlela ezahlukeneyo.
amerika american season 2 irhoxisiwe
Baye baba ngabahlobo bobuntwana, bajika iintshaba, babuyela kubahlobo, emva koko bathanda. Libali elinzima, elihlazo, nelimangalisayo elihamba kunye nobudlelwane obuninzi bobufanasini. Kukho izizathu ezisemthethweni zokuba ingabi yindebe yomntu wonke, kodwa akukho nto iyiphikisayo inikezela ngohlobo olutsha lwendlela amajelo eendaba abantwana angabonisa ngayo ukuthandana kwe-LGBTQ.
Imbewu yoko yasasazeka kwasekuqaleni. Xa ndathetha noNoelle Stevenson malunga Uye-Ra , wathetha ngendlela, ngaphandle kokunqongophala, abaphulaphuli bathabathe umyalezo ongezantsi kwangoko, owamvumela ukuba atyhalele ngakumbi izinto zesitudiyo. Okwangoku, ayenzanga ukuba iCatradora ibe yinto eqinisekileyo, nokuba oku bekuyinxalenye yesicwangciso kwasekuqaleni, njengoko Ucacisele i I-AV. Iklabhu :
Kwintlanganiso yokuqala endandinayo emva kokufumana igig ukubhala umqhubi wenqwelomoya, bendithetha nomphathi wam welo xesha, uBeth Cannon, owayekhule engumlandeli omkhulu kaShe-Ra. Kwaye wandinika uluhlu lwezinto awayefuna ukuzibona ukuqala kwakhona: Wayefana, Uyazi, bendisoloko ndicinga ukuba uShe-Ra noCatra bekufanele ukuba bayazana. Ngebakhule kunye. Kutheni bengazange babonakale ngathi banalo naluphi na uhlobo lonxibelelwano omnye komnye? Babengathi abakhathalelanga kwaphela kwaphela. Kwaye oko kunamathele kum. Ndandifana, Kulungile, kulungile, kuba kuya kwenzeka ntoni xa uAdora esiba ngu-She-Ra kwaye eshiya uCatra ngasemva? Ngaba kukho ngaphezu komona nje? Ngaba kukho okungakumbi kunokungcatshwa nje? Kodwa gcinani engqondweni ukuba le phantse yayiyiminyaka emihlanu edlulileyo, kwaye ayisiyonto incinci ukuyithetha, Hei, She-Ra Inkosazana yamandla iyathandana kwaye inomdla wobufazi. Andizange ndikholelwe ukuba le yayizakuba yinto elula ukuyikhupha. Kodwa yayiyinto endandiyithanda kwasekuqaleni-kwaye, ngokunyaniseka, ndingene engxakini kuyo kancinci.
Nangona kunjalo, ekugqibeleni, wafumana intsikelelo yakhe wonke umntu awayemele akwenze, kwaye safumana ukwanga okwakungengomzuzwana nje okanye isiqendu esikhethekileyo esingakhange sifanane nesiza. U-Adora uzivumela ukuba athande kwaye azibeke kwindawo yokuqala ukusindisa ubomi bakhe. Igcina umhlaba. Uthando lukaCatra noAdora luvumela uShe-Ra ukuba angabuyeli ngokupheleleyo, kodwa aphelise ububi obukhulu beHorde Prime.
ICatradora ayisiyothando nje; yi i ukuthandana kwebali. U-Ra-ngumfazi osisitabane kwaye uthandana nomnye umfazi, kwaye kunye, balisindisile ilizwe. Amalungelo amaGay ayenayo.
Ngaba oku kuthetha ukuba asikabi nawo umgama omde ekufuneka siwuhambile? Akunjalongo noko. Sisafuna ngaphezulu kwe-mlm / nonbinary / trans romance kwiifoto zabantwana, kodwa oku kubalulekile, kuba yayililitye lokunyathela-elibalulekileyo. Abantwana abasakhulayo banokujonga Uye-Ra kwaye ubone iqhawe lesini. Akukho mbhalo ungaphantsi, kuphela yi-canon.
amantombazana am amahashe amancinci
(umfanekiso: Iphupha lomsebenzi wobugcisa)
Umphathi Wefilimu Emangalisayo
Isini Kwimidlalo Yevidiyo
Umary J Blige
imidlalo yendlala yokufunda imilebe emibi
Whale movie kunye chris hemsworth
iifayile ze-x ziqala kwakhona
spider man kude neetropiki zasekhaya
usweleke njani ukuba afe eswelekile